THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 – Hybrid Edition Tradeshow | Food Magazine Myanmar
THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 – Hybrid Edition Tradeshow
Department of International Trade Promotion – DITP, Thai Chamber of Commerce-TCC နဲ့ Koelnmesse တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 Tradeshow ကြီး အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးမှာဆိုရင်တော့ အစားအသောက်တွေကို ပြသပေးတဲ့အပြင် အစားအသောက်တွေကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပါ တစ်ခါတည်းပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပြုလုပ်မယ့် Food & Beverage ပွဲကြီးမှာ အစားအသောက်တွေကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ဒီနေ့ခေတ်စားသောက်မှုပုံစံတွေ၊ ဒါ့အပြင် အစားအစာတွေထဲမှာပါရှိတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ မူလဇစ်မြစ်တွေ၊ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပုံတွေ၊ အစားအစာတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မယ့် THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 ပွဲကြီးဟာ ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ hybrid edition trade show တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် လူကိုယ်တိုင်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို www.thaifex-anuga.com website မှလည်း online ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong Thani မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Online ကနေကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.thaifex-anuga.com ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Virtual Trade Show ကို joinရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် www.thaifexportervirtualtradeshow.com မှလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လာရောက်ကြည့်ရှုမယ့် ပရိသတ်တွေ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိစေရန်နှင့် ပြပွဲအတွင်း လူဉီးရေထူထပ်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက်လည်း ပြခန်းနေရာများကို တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ စိတ်ချရတဲ့အကွာအဝေးကို ထားရှိပေးထားပါတယ်။
(၁) ပြပွဲကြည့်ရှုလိုသူများသည် စမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် online registration ကို ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ပြပွဲအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချိန်ကိုလည်း မနက်၁၀နာရီမှ နေ့လယ် ၂နာရီအထိ တစ်ချိန်၊ နေ့လယ် ၂နာရီ မှ ညနေ ၆နာရီအထိ တစ်ချိန်၊ အချိန် ၂ပိုင်းခွဲပြီး ပြသပေးမှာြဖစ်လို့ တစ်ချိန်ကို လူဉီးရေ ၁၅၀၀၀ ထက်ပို၍ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိစေရန်လည်း ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
(၃) ပြပွဲကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့် ပြပွဲသို့မဝင်ရောက်မှီ DITP QUICK QR Code and Thai Chana (“Thailand Wins”) application မှာ အချက်အလက်များကို ပေးသွင်းစစ်ဆေးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
THAIFEX-ANUGA ASIA2020 ပြပွဲကြီးကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ Challenger 1-3, IMPACT Muang Thong Thani မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။
The Department of International Trade Promotion (DITP), the Thai Chamber of Commerce (TCC), and Koelnmesse proceed to organize THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 under the concept of “Eat Responsibly” to showcase the potential of Thai business operators. The exhibition not only presents the food and beverage innovation that captures the latest trends in modern consumption but also focuses on the taste or the benefits of food and responsible consumption. The exhibition showcases the origin of the ingredients, processes, and health consciousness through 8 categories of exhibitions, namely, Future Food, Free From Food, Food Ingredients, Asia’s Herb to the World, New Protein Source, Thailand Trust Mark, Style Bangkok Showcase and Halal to the World.
2. The entry is limited to2rounds per day: 10.00-14.00 hrs. and 14.00-18.00 hrs. (Not exceeding 15,000 people per round)
3. To enter the exhibition, visitors must scan the DITP QUICK QR Code and Thai Chana (“Thailand Wins”) application.